Batrị CR2032: ihe niile gbasara batrị bọtịnụ ndị kachasị ewu ewu | Akụrụngwa n'efu
Batrị CR2032: ihe niile gbasara batrị bọtịnụ ndị kachasị ewu ewu
Otu n'ime ụdị ndị a kacha mara amara ma ọ bụ batrị bụ CR2032, batrị bọtịnụ ndị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ. Site na ụfọdụ ndị mgbako na kọmpụtaị kọmputa iji debe oge na ntọala BIOS / UEFI, site na elekere, ihe njikwa, ekweisi, wdg. Ejiri ụdị batrị a dị ukwuu site na nnukwu ike ya na obere obere ya ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ dị ka AAA, AA, C, D na 9V.
Enwere dị iche ụdị, dị ka Sony, Duracell, Maxell, na ọtụtụ ndị nrụpụta. Ọnụ ya dị ihe dị ka € 1,75 ma ọ bụ € 2, ọ bụ ezie na ịnwere ike ịchọta blisters na ọtụtụ batrị CR2032 maka ọnụ ala dị ọnụ ala mgbe ịzụrụ ha na ngwugwu. Ọnụahịa na nnwere onwe abụghị naanị ihe na-eme ka ha maa mma, dịkwa nha ha, yabụ ha zuru oke maka obere ngwaọrụ ebe ịchọrọ nnukwu agagharị ma ọ bụ belata batrị nke kachasị.
1 Batrị batrị
2 Nkọwapụta CR2032 na mpempe akwụkwọ data
Batrị ụdị batrị na-agbanye na obere Ihe eji emechi ihe nkpuchi nke ihe nkpuchi, ya mere aha ya. N’otu ihu ha, ha nwere osisi dị mma, nke kwekọrọ na ihu ya na dayameta kachasị ukwuu, ya bụ, ebe ha na-enwekarị akara na ihe odide. Na azụ ihu bụ osisi na-adịghị mma. Iji jikọọ ha, a na-ejikarị kọntaktị nwere isi ya na onye na-eduzi ya ịkpọtụrụ osisi na-adịghị mma na flange nke na-eme ka ịkpọtụrụ na akụkụ ahụ na mpaghara elu (+). N'ụzọ dị otú a, enwere ike ibuli batrị n'otu akụkụ ya iji wepụ ya ma dochie ya n'ụzọ dị mfe.
Ma ihe mejupụtara ha, enwere ike iji Mercury mee ya (n'ihi na anaghị asọpụrụ gburugburu ebe obibi), cadmium, lithium, wdg. Ihe ha na-ebu mgbe ụfọdụ zuru ezu iji nye ike maka afọ 3 ruo 5, dabere na oriri nke ngwaọrụ ahụ. Na mgbakwunye na ọnụ ala ha na ogologo ndụ ha, esemokwu a na-eme n'oge ọpụpụ dị oke mma, nke na-eme ka ha zuo oke iji zere spikes ma ọ bụ itinye aka na oge. Nwepu ikpo oku di ala ka emekorita ya na obere ngwaọrụ.
CR2032, dị ka batrị bọtịnụ ndị ọzọ, kwụpụtara maka ya nkwụsi ike dị ukwuu na mgbanwe gburugburu ebe obibi, ihe nke batrị ndị ọzọ anaghị akwado nke ọma. Ọ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ọnọdụ okpomọkụ, site na -20ºC ruo 60ºC. Ọnọdụ okpomọkụ na-eme ka ha dị mma maka ebe oyi na oyi. Ha dịkwa mma ịchekwa, ebe ọ bụ na ha nwere ihe na-erughị 1% nhapu onwe ha kwa afọ, nke na-enye ha ohere ịchekwa maka oge 5 ihe batrị ndị ọzọ ga-ejide.
A na-ekesa ha na ụdị dị iche iche dị iche na nha, ụdị, voltages, ikike na ibu, yana ọbụlagodi na-akwụ ụgwọ, dị ka ị pụrụ ịhụ na tebụl na-esonụ na ụfọdụ n'ime ndị kasị ewu ewu:
Okpukpe Tipo Voltaji (V) Ike (mAh) Arọ (g) Dayameta (mm) Ogo (mm)
NXU 920 Lithium ion 2,3 5,5 0,5 9 2
NXU 1616 Lithium ion 2,3 18 1,6 16 1,60
SR41 Ihe nchara ocha 1,55 42 - 7,9 3,6
SR42 Ihe nchara ocha 1,55 100 - 11,6 3,6
SR43 Ihe nchara ocha 1,55 120 - 11,6 4,2
SR44 Ihe nchara ocha 1,55 180 - 11,6 5,4
SR45 Ihe nchara ocha 1,55 60 - 9,5 3,6
SR48 Ihe nchara ocha 1,55 70 - 7,9 5,4
SR626SW Ihe nchara ocha 1,55 28 0,39 6,8 2,6
SR726SW Ihe nchara ocha 1,55 32 - 7,9 2,7
SR927SW Ihe nchara ocha 1,55 55 - 9,5 2,6
Nkọwapụta CR2032 na mpempe akwụkwọ data
na njirimara teknụzụ nke batrị CR2032 a bụ:
Ndị nrụpụta: dị iche iche
Ike: 235 mAh, ya bụ, ọ nwere ike inye 235 mA maka elekere 1 ma ọ bụ ihe dịka 112 mA na awa 2, ihe dịka 66 mA maka awa 4, were gabazie ...
Dayameta: 20 mm
Ọkpụrụkpụ: 3,20 mm
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibudata a Mpempe akwụkwọ CR2032Nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ndị nrụpụta dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, nke a bụ otu:
Akwụkwọ data energizer CR2032
Nwere ike ịchọta ọtụtụ ụdị njikọta n'ahịa maka ụdị bọtịnụ ụdị a, dịka ị pụrụ ịhụ na foto ndị dị n'elu. Ha dị oke ọnụ, ị nwere ike resị ha na bọọdụ ahụ na atụdo ndị a gụnyere ma ọ bụ jikọọ ha na eriri, dabere na ụdị.
.Fọdụ njikọta bụ kpochapụwo, na njikọ njikọ ahụ na elu taabụ dịka m kwuru na mbụ. Ndị ọzọ dịtụtụ iche, ma kwe ka nchịkọta ahụ ka ọ dọrọ n’elu akwa mmiri gbara ya gburugburu. N'ụzọ dị otú a, ọ na-anọgide na kọntaktị na n'akụkụ abụọ, mana ha nwere ike ịdị ntakịrị mgbagwoju anya iji wepụ ma ọ bụrụ na akụkụ ọrụ ahụ dị obere. Mgbe ụfọdụ ọ naghị adị mfe slide ya ma dochie ya.
Eunicell BIOS CR2032 -…
Ndị ọzọ bụ ụdị clip, yana ogologo ọnụ nke ga-ejide batrị ahụ n'elu wee pịa ya megide njikọ njikọ. E nwekwara ụfọdụ ndị gụnyere igbe nwere ike lọ otu ma ọ bụ karịa batrị nakwa na ha nwere eriri iji nwee ike ijikọ ya na ndị na-agba ọsọ ngwa ngwa.
Nke a bụ maka nchịkọta CR2032, Enwere m olile anya na m nyere akaAjuju obula ma obu onyinye, echefula ịhapụ ihe gi kwuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Batrị CR2032: ihe niile gbasara batrị bọtịnụ ndị kachasị ewu ewu
Mgbe m na-eji Ohere $ M maara ịgbanwe batrị n'ihi na usoro elekere na-lagging mgbe ọ bụla reboot. Ogologo oge a kemgbe m kwagara Linux ma chọpụta na agbanwebeghị m nchịkọta ahụ. Na Linux anyị nwekwara nsogbu na elekere mgbe batrị na-agwụ?
Eeh, agbanyeghị ihe sistemụ arụmọrụ ị nwere ... Batrị ahụ gwụchara. Cheta na ị nwere ike ịmekọrịta elekere gị na UTC.
Kedu ihe dị iche na CR2032 H na CR2032 (na-enweghị H)
Zaghachi Jose Díaz
Nnọọ. Daalụ nke ukwuu maka ozi a.
Echere m na e nwere njehie na ibe ahụ, ma ọ bụ na m gaghị aghọta ihe kpatara ihe ndị a.
E nyere ụfọdụ elu maka ọnụ ọgụgụ ahụ na mm ọnụọgụ abụọ nke ikpeazụ, mana ya na kọma, ya bụ, dịka ọmụmaatụ, 2032 bụ 3,2 mm. Na-etinye ụfọdụ nha na-enweghị akara ahụ; Ihe Nlereanya ị tinyere na CR2330 nke tụrụ 30mm, ya bụ, 3cm.
Etu esi mepụta seismograph nke ụlọ site na nchapu site na nkwụsị
Arụrụ ụgbọ ala simulator: otu esi ezukọta ya site na nzọụkwụ